A na-enwe nzukọ nzukọ 3 nke isii nke Zhejiang Plumbing Valve Industry Association nke isii
Zhejiang plumbing valvụ ụlọ ọrụ mkpakọrịta, guzobere na Machị 2003, ka Provincial Economic and Trade Commission kwadoro ya ma debanye aha ya na Ngalaba Ọha. Isi ụlọ ọrụ ahụ dị na Yuhuan County, Zhejiang Province. Mmekọrịta a abụghị uru, akụ na ụba na c ...
Nsogbu Mbupu na Mee 2021
Na ụbọchị ndị a, akụkọ banyere ngwa ngwa ngwa ngwa na-akpata site na mkpọchi na ọdụ ụgbọ mmiri nke North America na ogologo oge echere maka ụgbọ mmiri na-aga n'ihu na-enweghị njedebe. Ndị na-ebugharị ụgbọ mmiri na-atụ anya iwelata mmetụta dị na ahịa lọjistik ka ha na-agbanwe na enweghị ike imezu mkpa niile. Na A ...
Developmentdị Mmepe Brass Valve
Dịka ihe nkwado dị mkpa na-akwado ngwaahịa, a na-eji ọla kọpa na ọla kọpa n'ọtụtụ ebe na ike eletriki, petrochemical, metallurgy, nchedo gburugburu ebe obibi, kol na mpaghara ndị ọzọ nke akụ na ụba mba na nchekwa mmiri, iwu obodo na ihe owuwu ndị ọzọ. T ...
Na 2026, ọnụọgụ ahịa nke valvụ njikwa ga-eru ijeri US $ 12.19
site ha na 21-04-10
Valve njikwa na-achịkwa mmụba nke mmiri, dị ka gas, uzuoku, mmiri ma ọ bụ ngwakọta, nke mere na onye na-agbanwe agbanwe nke usoro nhazi mepụtara dị ka o kwere mee uru bara uru achọrọ. Valve Control bụ akụkụ kachasị mkpa nke usoro njikwa njikwa ọ bụla, n'ihi na ha dị ezigbo mkpa ...
Mmiri ọgwụgwọ valvụ
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị isi obodo na ndị gọọmentị na-aga n'ihu na-eme ka atumatu ọchịchị gburugburu ebe obibi sie ike, na mmetụta nke COVID-19 emeela ka ndị na-azụ ahịa na-achọwanye ahụike na nchebe gburugburu ebe obibi. N'ọnọdụ a, ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri na-emeso mmiri gosipụtara na nso nso a ...
Accelerating ulo oru mgbanwe na upgrading nke valvụ ụlọ ọrụ
Dịka akụkụ nchịkwa nke sistemụ njem ụgbọ mmiri, valvụ nwere ọtụtụ ọrụ, dị ka nkwụsị, iwu, ntụgharị, mgbochi mgbochi, ntụgharị, mgbatị nrụgide, wdg.Enwere ọtụtụ ụdị na nkọwa dị iche iche. Na-aga n'ihu mmepe nke valvụ technology, na ngwa fie ...
Wandekai guzobere usoro ọhụụ nke HVAC
Iweghachite akụ na ụba ụwa bụ ihe omume nwere ike ịdị ukwuu Site na mmụba na ojiji zuru oke nke ọgwụ mgbochi COVID-19, a na-atụ anya na ntiwapụ ahụ ga-enwe nke ọma na ọkara mbụ nke 2021, na-enweghị ngbanwe ọ bụla, na mgbake akụ na ụba ụwa ga-eme ngwa ngwa. . Akụ na ụba ụwa m ...
Yuhuan: Push Forward the Reform nke Valve Industry Chain Integration
Yuhuan obodo bụ ndị kasị ibu mmepụta na mbupụ isi nke ọkara na ala nsogbu ọla kọpa valves na China, mara dị ka "China valvụ isi obodo". E nwere ihe karịrị 1300 Plumbing na valves n'ichepụta na nhazi ụlọ ọrụ na obodo, na-enwe kwa afọ mmepụta uru nke ...
Kemgbe mmalite nke 2021, ọnụ ahịa ọla ọla emeela ka ndị mmadụ nwee nsogbu
Kemgbe mmalite nke 2021, ọnụ ahịa ọla ọla emeela ka ndị mmadụ nwee nsogbu. Mgbe Yearbọchị Afọ Ọhụrụ gasịrị, ọnụ ahịa ọla ọla na-ebili, ihe karịrị 17%. Okwesiri ighota na mgbe ememme opupu ihe ubi na 2021, ugwo ọla di na-ebili na onu ahia ruru ihe ozo di elu ...
Na-eche mmetụta nke COVID-19 ihu
Ndị COVID-19 metụtara na 2020. Ọnụ ahịa nke ibupu ngwongwo n'etiti China na Europe arịala elu na mkpọchi ọrịa na-eme ka ịzụ ahịa ịzụ ahịa n'ịntanetị, na ụkọ nke ihe eji ebu njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-emebi azụmahịa ụwa. Ọnụ mbupu akpa abanyela na ntanetị ...
Na Febụwarị 26,2018, Onye isi oche ahịa Lihong Chen na-eleta ndị mmekọ Bromic Group anyị ogologo oge. Mgbalị kwesịrị imeju afọ ndị otu a chọrọ, nyere ndị mmekọ aka ịzụlite ahịa.Main mepụta gụnyere: Multi Tụlee Tụkwasịnụ Valves; F1960 & F1 ...
Ceremonybanye n'ememe nkwekọrịta nkwekọrịta zuru ụwa ọnụ
Na Jenụwarị 30,2018, e mere emume mbinye aka maka imekọ ihe ọnụ zuru ụwa ọnụ n'etiti WandeKai na WATTS. Watts bụ onye ndu ụwa zuru oke nke ngwọta mmiri dị mma maka ụlọ obibi, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke ime obodo, na nke azụmahịa. WandeKai wulite mmekọrịta siri ike na Watts maka ...